မြတ်လေးငုံ: ကဲ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေစိစစ်ရေးကလူကြီးများ ဤ ပုံအားကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်လား
ကဲ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေစိစစ်ရေးကလူကြီးများ ဤ ပုံအားကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်လား
စာပေစိစစ်ရေးက ပိတ်ပင်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး
စာပေစိစစ်ရေးက ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ ပုံ..
ကဲ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ရှင်.၊ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ လည်း ဗိုလ်ချုပ်ပြော တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်နေပြီး လား တောင်မသိ တော့ပါဘူး.၊မော်ဒန်မယ်တွေ၊ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ၊ အဆိုတော် တွေ လည်း အဝတ်အစား မရှိရှာ တာ လား၊တမင်ဘဲ ဖော်ပြနေတာလား ဒါမှ မဟုတ် နံမည်ကြီးအောင် လုပ်တာလား၊ စပွန်ဆာရှာတာ လား၊ မြန်မာနိုင်ငံ က စာပေစိစစ်ရေး လူကြီးမင်းများ မျက်စိအစာကျွေးဘို့ အတွက် ဖော်ပြပေးတာလား၊ မိဘတွေကလည်း ကိုယ့်သားသမီး ကို ကြည့်ကောင်းနေတာလား၊ လား ?...လား ? ဆိုတဲ့ မြောက်များစွာသော လား ? တွေဘဲ လား? မသိတော့ပါဘူးရှင်.. ။